Long isondo lokugijimisa indiphi elenzelwe into esindayo - China Suzhou Lihui Engeering
Bomag iraba sesikhashana
Long isondo lokugijimisa indiphi elenzelwe into esindayo
Buyela isondo lokugijimisa indiphi elenzelwe into esindayo yemishini wokugaya. W100, w100H, W1000F, W1200F, W1900, W2000, W2100, W2200. Ukuqinisekisa ongaphakeme-friction nokusakazwa amabhande elihambayo. Kalula ukuxhumana detachable benza ekushintsheni roller nomsebenzi olula. Ngenxa yalokho, okwenza kube yibhande elihambayo kungaba nekama high elihambayo phama low power ukusetshenziswa. I kalula attachable isondo lokugijimisa indiphi elenzelwe into esindayo sokungenzi lutho igeja inkatho kuqinisekisa eyize elihambayo umthamo.
Fob Inani: US / Piece
Supply Ikhono: 5000 Piece / Pieces Inyanga ngayinye
Buyela isondo lokugijimisa indiphi elenzelwe into esindayo yemishini wokugaya. W100, w100H, W1000F, W1200F, W1900, W2000, W2100, W2200.
Ukuqinisekisa ongaphakeme-friction nokusakazwa amabhande elihambayo. Kalula ukuxhumana detachable benza ekushintsheni roller nomsebenzi olula. Ngenxa yalokho, okwenza kube yibhande elihambayo kungaba nekama high elihambayo phama low power ukusetshenziswa. I kalula attachable isondo lokugijimisa indiphi elenzelwe into esindayo sokungenzi lutho igeja inkatho kuqinisekisa eyize elihambayo umthamo.
Previous: isondo lokugijimisa indiphi elenzelwe into esindayo Idle
Olandelayo: isondo lokugijimisa indiphi elenzelwe into esindayo
Buyisela isondo lokugijimisa indiphi elenzelwe into esindayo
Ukushayela isondo lokugijimisa indiphi elenzelwe into esindayo
isondo lokugijimisa indiphi elenzelwe into esindayo Idle